के हो 'चिनियाँ सपना'? - China Radio International
(GMT+08:00) 2014-03-05 09:18:27
सन् 2012 मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनले सी चिङ फिङलाई महासचिवमा चयन गरेपछि नेता सीले पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याउनु भएको हो चिनियाँ सपना। सन् 2012 मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव र सन् 2013 मा चीनको राष्ट्राध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेता सीले चिनियाँ सपना पदावलीको प्रयोग मात्र गर्नु भएन त्यसको सविस्तार वर्णन पनि गर्नुभयो। नेता सीका अनुसार वृहत राष्ट्रिय पुनर्ताजकीकरण, जनताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार, प्रगति, अझै उन्नत समाजको निर्माण र सैनिक सशक्तीकरण नै चिनियाँ सपना हुन्। उहाँले युवावर्गलाई निरन्तर परिश्रम गर्दै राष्ट्रलाई पुनर्जीवन दिन साहस र अठोट लिएर चिनियाँ सपनालाई साकार बनाउन पनि आग्रह गर्नु भएको छ। चिनियाँ सन्चार माध्यमहरुका अनुसार चिनियाँ उन्नती, सामूहिक प्रयाश, 'चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी बजार अर्थनीति' र राष्ट्रिय गौरव नै चिनियाँ सपनाका तत्वहरु हुन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी चिङ फिङ वर्तमान चीनका राष्ट्राध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चिनियाँ सपना चीनका भविष्यमा रहेका दुईवटा शतवार्षिकोत्सवसम्मा आधारभूत प्रमाणचिन्हका रुपमा विश्वले देख्नेगरी साकार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सन् 2021 मा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकोत्सव हो। त्यसैगरी सन् 2049 मा नयाँ चीन स्थापना भएको शतवार्षिकोत्सव पर्दछ। नेता सी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र जनगणतन्त्र चीनको नेता भएकै समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शतवार्षिकोत्सव हुनेछ। सन् 1949 अक्टोबर 1 मा नयाँ चीन स्थापना भएपछिको समयमा जन्मिएर पार्टी र राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने सी चिङ फिङ पहिलो नेता हुनुहुन्छ। उहाँले आफू महासचिवमा निर्वाचित भएपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनको समापन समारोहलाई दिनु भएको सम्बोधनमा चिनियाँ सपनाले दुईवटा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको बताउनुभएको थियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शतवार्षिकोत्सव मनाउने समय सन् 2021 सम्ममा चिनियाँ समाजलाई समान र मध्यमस्तरमा सुसम्पन्न गराउने कार्य चिनियाँ सपनाको पहिले लक्ष्य हो। त्यसैगरी आधुनिक चीनलाई नयाँ चीन स्थापनाको शतवार्षिकोत्सव सन् 2021 सम्ममा पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाउने कार्य चिनियाँ सपनाको अर्को लक्ष्य हो।
चिनियाँ सपनाका यी दुईवटा महात्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हरेक चिनियाँ युवाले गहन परिश्रम गर्दै पार्टी र सरकारका सबै तहबाट अथक कार्य गर्नुपर्ने कुरामा चिनियाँ नेता सीले आग्रह गर्नु भएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारले चिनियाँ युवापुस्तामा व्यावसायिक विकास गर्नका लागि सहयोग गर्ने नीति पनि अगाडि सारेको छ। युवापुस्तामा भएको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सिर्जनशीलता, उर्जा, जुझारुपन, सक्रियता र अदित्तीय क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने चिनियाँ नीति नै समग्र चिनियाँमा विकसित साझा चिनियाँ सपना हो।
चिनियाँ सपनाभित्र चारवटा भाग रहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्। पहिलो भाग हो सशक्त चीन। चीनलाई आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक, बैज्ञानिक र सैनिक शक्तिबाट सशक्त बनाउनु चिनियाँ सपनाको पहिलो भाग हो। चिनियाँ सपनाको दोस्रो भाग हो शभ्य चीन। चीनलाई समान र न्यायिक, सांस्कृतिक सम्पन्न र उच्च नैतिक रुपले शभ्य बनाउनु चिनियाँ सपनाको दोस्रो भाग हो। त्यसैगरी चिनियाँ सपनाको तेस्रो भाग सुरम्य चीन। चिनियाँ समाजका विभिन्न वर्ग, तह, जाति, पहिचान आदि क्षेत्रमा मैत्रीभाव विस्तार गरेर सुरम्य चीनको निर्माण गर्नु चिनियाँ सपनाको तेस्रो भाग हो। चिनियाँ सपनाको चौथो तथा अन्तिम भाग हो सुन्दर चीन। चीनमा स्वस्थ वातावरणको सिर्जना गर्नु र प्रदूषण न्युनीकरण गर्नु नै चिनियाँ सपना पूरा हुनु हो।
चीनले खुला अर्थतन्त्र र सुधारिएको समाजवादी व्यवस्था अँगालेको 35 वर्षमा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ। विकसित कहलिएका पश्चिमा पूँजीवादी मुलुकले चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका समयमा आफ्नै विशेषतायुक्त बजार अर्थनीतिले चीनलाई आर्थिक संकट हुनबाट अहिलेसम्म जोगाइराखेको छ। सुधार तथा खुलापन लागू भएपछिको साढे तीन दसकमा चीनको गार्हस्थ्य अर्थतन्त्र अन्य राष्ट्रको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् 1979 देखि 2012 सम्मको अवधिमा चीनको औसत आर्थिक बृद्धि दर 9.8 प्रतिशत रह्यो, जुन बेला विश्वको औसत आर्थिक बृद्धि 2.8 प्रतिशत मात्र रहेको थियो।
विश्व बैंकको तथ्याक अनुसार, चीनमा प्रतिव्यक्ति आय सन् 1978 मा 190 अमेरिकी डलर थियो। सन् 2012 मा प्रतिव्यक्ति आय5हजार6सय 80 अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो तथ्याङ्कबाट चीन कम आम्दानी हुने मुलुकबाट मझौला स्तरको आम्दानी हुने मुलुकमा परिणत भइसकेको छ। दोहोरो अङ्कले वृद्धि भइरहेको चिनियाँ आर्थिक विकासको गति अनुसार सन् 2020 सम्ममा चीनमा प्रतिव्यक्ति आय 10 हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा समान गराउनका लागि चीन सरकार प्रयत्नरत छ र ग्रामीण क्षेत्रका चिनियाँ जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि विशेष रणनीति अपनाइएको छ। सन् 2030 सम्ममा 70 प्रतिशत चिनियाँ जनताको जीवनस्तर सहरी क्षेत्रको सुबिधासम्पन्न हुने गरी कार्यक्रमहरु तय गरिएको छ। त्यसपछिको चीनको विकास भनेको आधुनिक सर्वसम्पन्न चीन निर्माणको अवस्था हो। त्यसका लागि चीनले विज्ञान र प्रविधिसँगसँगै अर्थतन्त्र र व्यापार, चिनियाँ सभ्यताको पुनः विकास, संस्कृति र सैनिक सुसम्पन्नता, र चीनले सबै क्षेत्रका मानव शंसाधनमा सहभागी हुन योग्य मानिनेछ।
चिनियाँ सपनालाई साकार बनाउनका लागि एक अर्ब 37 करोड चिनियाँको सामूहिक प्रयास र परिश्रमको अहं भूमिका रहेको छ। चिनियाँ श्रमलाई विश्वमै सस्तो श्रम मानिन्छ। फलस्वरुप चिनियाँ उत्पादनले विश्वबजार पिटेको छ। बीसौँ शताब्दीको अन्त र एक्काईसौँ शताब्दीको सुरुदेखि चिनियाँ प्रविधिले चीनलाई मात्र हैन संसारलाई नै सुविधासम्पन्न बनाउँदैछ। विकासका पूर्वाधार अनुसार चीनले सबै जिल्लामा सडक सुविधा उपलब्ध गराएको छ। सहरी क्षेत्रको विकासमा अत्याधुनिक सुविधा र प्रविधि जडान गरेको छ। अमेरिका र युरोपले पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरेकाले उनीहरुलाई आधुनिक प्रविधि जडान गर्न समस्या छ तर चीनले अत्याधुनिक प्रविधिसँग आफूलाई सर्वोच्च बनाउँदैछ।
विश्वका वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री र भूगोलविदहरुले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतमा रेलवे सेवा विस्तार गर्न असंभव किटानी गरेका थिए। विश्वकै उच्च भाग जहाँ अक्सिजनको कमी र अत्यधिक हिमपातले रेलवे सेवा सुचारु गर्न नसकिने उनीहरुको निष्कर्शलाई चीनले चुनौति दिँदै उनीहरुको भविष्यवाणीलाई छोटो समयमै असफल बनाइदियो। अन्तरिक्ष विज्ञानमा पनि चीनको प्रगति नियाल्दा गजबका तथ्याङ्कहरु फेला परेका छन्। केही समय अगाडि चीनले चन्द्रमामा प्रक्षेपण गरेको 'छाङ्अ-3'का लागि छुट्याइएको रकम चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जी.डी.पी.) परिमाणको दश लाख भागमध्येको एक भाग मात्र रहेको छ। सन् 2012 मा चीनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जी.डी.पी.) 518 खर्ब 94 अर्ब 20 करोड चिनियाँ युआन रहेको थियो।
अमेरिकाले चन्द्रमाको अन्वेषण (एपोलो)परियोजनामा 25 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको बताएको थियो। तर दश वर्षसम्म गरिएको अध्ययनपछि त्यति बेला अमेरिकाले चन्द्रमाको अन्वेषण परियोजनामा तत्कालीन अमेरिकी जी.डी.पी.को 2.5 प्रतिशत लगानी गरेको पुष्टि भएपछि अमेरिकी एपोलो परियोजनाको तुलनामा चिनियाँ छाङ्अ परियोजना धेरै सस्तो र बढी सफल रहेको स्पष्ट भएको छ।
तसर्थ चीनको आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, न्यायिक, राजनीतिक, कुटनीतिक, प्राविधिक, वातावरणिक लगायतका क्षेत्रमा उच्च सुधार र प्रगति हासिल गरेर संसारमै उदाहरणीय चीन, उत्तम चीन, विकसित चीन, सर्वोत्कृष्ट चीन र शभ्य चीनको विकास गर्ने लक्ष्यलाई चिनियाँ सपना मान्न सकिन्छ। निचोडमा भन्नुपर्दा चिनियाँ समाजको रुपान्तरण र आर्थिक प्रगतिका लागि चिनियाँ जनताको सामूहिक चेतना नै चिनियाँ सपना हो।
साभारः राजधानी राष्ट्रिय दैनिक मार्च 3， सोमबार 2014